Koorsada BIM 4D - adoo adeegsanaya Navisworks - Geofumadas
Waxaan kugu soo dhaweyneynaa deegaanka Naviworks, oo ah aaladda wada shaqeynta Autodesk, oo loogu talagalay maareynta mashaariicda dhismaha.
Markii aan maareyneyno dhismaha iyo mashaariicda dhismaha dhirta, waa inaan wax ka bedelnaa oo dib u eegnaa noocyo badan oo feylal ah, hubinnaa in farsamooyinka kala duwan ay wada shaqeeyaan, iyo in la mideeyo xogta si loo sameeyo bandhigyo awood leh. Iyadoo la adeegsanayo Autodesk Navisworks waxaad ku sameyn kartaa tan iyo wax badan.
Koorsadan waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo dib-u-eegista iskaashiga ah ee faylasha laga helo Revit, Autocad, Civil 3D, Plant3D iyo barnaamijyo kale oo badan, dhammaantoodna waxay ku dhex jiraan Naviworks. Waxaan ku bari doonnaa inaad ku qaadato safarro teelteel ah moodooyinka oo aad abuurto jilid dhisme. Waxaad baran doontaa sida loo sameeyo jeegagga faragelinta anshax-marinta oo loo abuuro sawirro sawir-qaadis ah oo ah qaab midaysan.
Si iskaashi ah uga shaqee kooxaha BIM
Hel qalab loogu talagalay kormeerka iyo tafatirka faylasha badan ee BIM
Kudar safarro dalxiis oo is-dhexgal ah soo bandhiggaaga mashruuca
Bixi jawiga barnaamijyada kala duwan
Abuur jilitaano hawl-socod ah 4D
Ku orodo tijaabooyinka faragelinta inta udhaxeysa moodooyinka edbinta badan
Muhiim ma aha inaad yeelato aqoon hore
Koorsadani yaa loogu talagalay:
Xirfadlayaal laxiriira qaabeynta iyo dhismaha shaqooyinka
Tag koorsada Navisworks
Post Previous" Hore Koorsada Hindisaha Nastran
Post Next Diblooma - Khabiir BIM MEPNext »